Fandikana lalànan’ny fifamoivoizana :: Nahatratra dimy amby fitopolo ny sarety sy posy naiditra trano fihibohana • AoRaha
Fandikana lalànan’ny fifamoivoizana Nahatratra dimy amby fitopolo ny sarety sy posy naiditra trano fihibohana
Mitohy ny hetsika ho fifehezana ny fifamoivoizan’ireo sarety sy posiposy amin’ny ora sy toerana tsy tokony handehanany. Nahatratra dimy amby fitopolo no efa naiditra trano fihibohana, tao anatin’ny herinandro maromaro izao.
Nohamafisin’ny avy ao amin’ny Prefektioran’Antananarivo renivohitra fa noferana amin’ny 10 hatramin’ny 12 ora hatrany, amin’ny tapany maraina. Amin’ny 2 ora hatramin’ny 4 ora kosa ny tapany hariva no ahafahan’ny sarety sy posy mifamezivezy. Tsy azon’izy ireo idirana ny eny afovoan-tanàna sy amin’ny toerana fiakarana, toa an’Analakely, Anosy, Mahamasina, Ambohidahy, Ambohijatovo. Misy takela-by amin’ireo toerana ireo izay mamaritra an’ireo fitsipika mifehy ny fifamoivoizana ireo.
« Tsy fanapahan-kevitry ny Prefektioran’Antananarivo renivohitra irery ny nampiharana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana ho an’ireo karazana fitaterana ireo fa nantsoina nanatrika ny fivoriana nataon’ny Vondrona iraisana amin’ny famolavolana ny filaminana (OMC) ny fikambanan’ny tompon’ny sarety sy posy. Nifanarahana tao ny ora hahazoan’izy ireo mifamezivezy mba tsy hanelingelenan’izy ireo ny lalana amin’ny ora maha be olona. Rehefa tonga ny fampidirana trano fihibohana dia miara-voasazy amin’ny mpitarika ny tompony ka mandoa ny saran’ny sazy », hoy ny jeneraly Ravelonarivo Christian Angelo, Préfet-n’Antananarivo renivohitra.
Fantatra fa rehefa voaloa ny saran’io sazy io dia mivoaka ny sarety sy posy nogiazana.
Amin’iny faritra Anosy iny no tena betsaka tratra amin’ny tsy fanajana an’ireo ora voatondro ireo.
Tsiahivina fa tamin’ny volana jona lasa teo no nanomboka nihatra io famerana ny ora hiasan’ny sarety sy posy io. Tato ho ato anefa mbola maro izy ireo no mifamezivezy an-kalalahana eny rehetra eny.
Fanambaram-pananana Kivy amin’ny afitsok’ireo solombavambahoaka ny Bianco
Fisorohana fiparitahana valan’aretina Vahiny avy any Shina sivifolo mahery arahi-maso akaiky
“Afrobasket 2021” Azon’i Madagasikara ny tapakila amin’ny dingana manaraka
Lalaon’ny Nosy 2019 :: Niraradraraka ny mariboninahitra sy vola ary fampanantenana teny Iavoloha
Fivoriana tsy ara-potoana :: Be fitakiana momba ny fanaraha-maso sy ny fanoherana ireo Antenimiera